Umsebenzi ojikelezayo wethambo lokomba - i-canulate canill drill - i-craniotomy drill -Ukubuyisela unyango ngesarha- ukusasaza kwezonyango ukubona umenzi weewholeji - wuhu Ruijin medica
I-RJ-PD yoQeqesho lombane wombane
Uqhoqhoqhoo olungenanto / ukurhola
Intambo encinci yethambo
Uhlobo lweMicro lokwenza utyando lwesihluma
RJ-PS Medical isarha yombane
Ukubona udaka lombane
I-Sternum yabona / ibuyisela kwakhona isarha
Isarha ekhazimlayo encinci
RJ-MP Medical Electric wabona drill
Inkqubo yombane yombane
Micro wabona drill
Inkqubo yokugaya i-Cranial drill
I-Wuhu Ruijin Medical Instrument kunye nezixhobo zeCo
leran ngakumbi Qhagamshelana nathi
izixhobo zethambo zamathambo
s izixhobo zamandla orthopedic
Ukubonelela ngeemveliso ozifunayo
I-ND-2511 yokurhola i-Drill
I-drill esandula ukwenziwa isetyenziselwa ukubamba i-k yocingo, uqhaqho olungenayo lwe-intraumedullary kunye noqhaqho lwe-arthroscopic. Ingamelana nobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu ukuya kuthi ga kwi-135 centigrade. Ngaphandle koko, sinokunikela ngeendlela ezahlukeneyo ezinje nge-AO, Stryker, Hudson njl.
I-SS-1011 yoSawulo lokuSebenza
Uthotho olusandula ukwenziwa lwe-S series brushless oscillating bone saw, eyakhiwe ngesandla, itshaja, iibhetri kunye neesarha zesarha, isetyenziselwa ikakhulu utyando kunye nokudibana ngokudibeneyo. Imoto yayo engeniswa kwamanye amazwe isebenza ngokukuko ngakumbi nangokuchanekileyo; Uyilo lwe-ergonomic lwenza ukuba uzive ukhululekile ngesandla; Ukuthotyelwa kwebhetri enkulu kunokwenza amandla anamandla ukwanelisa iimfuno zabathengi.
Funda ngakumbi malunga nenkampani yethu
Cacisa ukuqonda komxholo weshishini
Umenzi okhokelayo wezixhobo zamandla zamathambo.
I-Ruijin yinkampani edibeneyo yesayensi, imboni kunye nezorhwebo, ikakhulu ukubonelela ngesarha yombane kunye ne-drill yezixhobo zamathambo ezisuka kwisarha yonyango, ukubola kwethambo eliqhelekileyo, isarha ejikelezayo, ukurhola i-acetabular reamer drill, i-micro bone drill saw, isternum saw, Inkqubo ye-cranial kunye ne-drill ye-drill njl njl, zonke zisetyenziswa ngokubanzi kwiintlobo zemisebenzi yamathambo.
Umboniso wesibonelelo seshishini
Umenzi wobungcali, umgangatho obalaseleyo, iiyure ezingama-24 zenkonzo ekhompyutheni.
Iminyaka eli-10 +
Phantsi kwemizamo engagungqiyo yabo bonke abasebenzi baseRuijin, sizuze uphuhliso olukhulu nangona sele kudlule iminyaka elishumi elinesithathu.
Sigxininisa "kuMgangatho ufuna ukusinda kwaye ulawulo lufuna uphuhliso."
Sineqela eliyiliweyo lokuyila iimveliso ezintsha.
Sine-ENISO 1 3 4 8 5: 2 0 0 3 kunye nezatifikethi ze-CE0123 ezikhutshwe yiJamani TUV.
Sinezixhobo eziphambili zokuqinisekisa umgangatho kunye nemveliso.
Sinikezela ngenkonzo ethembekileyo emva kokuthengisa ukusombulula zonke iinkxalabo ezilandelayo.
Gcina unolwazi ngeendaba zeshishini
Izazinzulu ziphuhlisa i-biomaterial yenoveli ekhawulezisa ibhon ...
Iinzululwazi ziye zaphuhlisa i-biomaterial entsha enceda amathambo aphilise ngokukhawuleza ...
I-Nuvasive iphehlelela i-Plate Lengthening Plate njenge-Alternative T ...
I-NuVasive's Limb eyandisa i-Precice Plate / ...
Ukuqonda okutsha kwizifo zamathambo
Uphononongo lubalaselisa iindima zemfuza kwiiseli zokujonga umthwalo ekukhuleni kwethambo; c ...
I-SS-3032 ye-Sternum yabonwa
SS-3031 Ukubuyisela kwakhona iSaw
I-NS-3532 iSternum Saw
I-NS-3531 yokubuyisela kwakhona iSaw
I-NS-3032 ye-Sternum Saw
I-NS-3031 yokubuyisela isaha
I-NS-2011 Mini 360 ° Ukukhwela iiMicro eziNcitshisiweyo zeMicro
I-NS-2011 Lithium Ibhetri esetyenzisiweyo ye-360 ° yokuhambisa iMi ...
Ifowuni: 0086 553 2672510/2672511
Idilesi: N0.33 wanchun indlela, Wuhu, Anhui, China